Global Voices teny Malagasy · 13 Aogositra 2017
13 Aogositra 2017
Tantara tamin'ny 13 Aogositra 2017
Sary Avy Any Goiana Frantsay: Tandremo Ny Zanakareo
Karaiba13 Aogositra 2017
''Araho maso na... fatory ny zanakareo.''
Tontolon'ny Bilaogy Hindi: Fitsidihana, Aretimifindra “Fanamarihana” & Indibloggies!
Amerika Avaratra13 Aogositra 2017
Zara raha misy andro ray tsy ahitàna resaka pôlitika, efa lasa anisan'ny sakafo hanina isan'andro toy ny vitaminina fanampintsakafo izy ity, raha tsy misy resaka pôlitika mihitsy mandritra ny tontolo andro dia mahatsapa toy ny hoe tsy misy sakafo holevonina izany ao anatin'ny vavony! ;)
Taobao ao Shina Miatrika Tafiotra Noho ny Fivarotana Ireo Hafatra Manokana Noventesin'ireo Ankizy Afrikana
"Mahamenatra tanteraka! Tsy tokony hoetaperin'ny Taobao fotsiny ny fiaraha-miasa amin'ireo fivarotana ireo fa tokony hanadihady an'ireo mpivarotra amin'ny dokambarotra diso sy fanavakavahana tsy tia mainty hoditra ihany koa izy!"
KarmaTube: Mampiroborobo Ny Fanovana Amin'ny Alalan'ny Fizarana Lahatsary/KarmaTube : Promouvoir le changement par le partage de vidéos
Amerika Latina13 Aogositra 2017
KarmaTube dia sehatra fifampizaràna lahatsary antserasera mba handefasana lahatsary fohy sy ny antony [ araka ny nofaritan'izy ireo] ao amin'ny Habaka. Manolotra anareo ny Skateistan avy any Afghanistan izahay , ny Seeds of Light avy any Afrika Atsimo, ary ny Barrios de Paz avy any Ekoadaoro amin'ny alàlan'ny KarmaTube.
Nakaton'i India Ny Internet Archive Sy Ny Tranonkala Mpizara Tahiry Maherin'ny 2.600 Mba Hiarovana Ny Bollywood
Azia Atsimo13 Aogositra 2017
Toa ny Bollywood no antony nahatonga ny Internet Archive (archive.org) nakatona tao India, tranom-boky nomerika ahafahan'ny olona mahita ireo endrika fitehirizana pejy habaka amin'ny alalan'ny tolotra maimaim-poana antsoina hoe Wayback Machine.
Goatemalà: Mankalaza Ny Saripika Mandritra Ny Volana Septambra
Nandritra ny volana Septambra, nankalazaina tao amin'ny trano fampirantiana zavakanto tao an-drenivohitra Antigua sy Quetzaltenango ny zavakanton'ny fakana sary. Nampiasa bilaogy ankehitriny ny trano fampitantiana zavakanto nandray anjara tamin'ny hetsika antsoina hoe Foto30 mba hanomezana vaovao momba ireo mpanakanto sy hamelana ireo mpitsidika hifanakalo hevitra ao amin'ny fampiratiana.
Koety: Ny Fifangaroan'ny Havandra, Orana, Rivotra Ary ny Vovoka Mahatsiravina
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana13 Aogositra 2017
(Marihina fa tamin'ny 12 Aprily 2008 no nanoratana ny lahatsoratra teny anglisy) Tsy mahazatra tamin'ity taona indray mitoraka ity, namely an'i Koety ny karazana ‘Tadio kely,’ izay nahitana “ny fifangaroan'ny havandra, orana, rivotra, vovoka, ary rivotra nifofofofo mahatsiravina ” araka ny tenin'ny bilaogera Kuwaitism. Niaraka tamin'ny finday sy ny fakantsary...
Nisotro Renirano Hanaporofoana Ny Fahadiovany Ilay Mpanangom-baovao Shinoa Tao Anatin'ny “Dokambarotra Nahazo Tsikera Betsaka”
Azia Atsinanana13 Aogositra 2017
"Afaka mivoatra eo amin'ny asany ity mpanangom-baovao ity. Tongava fa misy toerana ao amin'ny Biraon'ny Tontolo Iainana. Tongava maka ny toerana." "
Fanavaozana Ny Fifidianana Ao Filipina
Iray amin'ireo tsy mahomby indrindra eto amin'izao tontolo izao ny rafi-pifidianana ao Filipina. Mety maharitra iray volana mahery no hahafahana mamantatra ny voka-pifidianana aorian'ny androm-pifidianana satria mbola atao tanana ny fanisana ny vato.